I-Edgartown Isebenzisa i-Ellicott 370 Dragon® Dredge ukukhipha iSand for Project Nourishment Project- i-Ellicott Dredges
I-Edgartown Isebenzisa i-Ellicott 370 Dragon® Dredge ukukhipha iSand for Project Nourishment Project
Ikomidi le-Edgartown dredge livumile ukukhipha isanti ngaphezulu kwe-20,927 yd³ (16,000 m³) yesihlabathi eSondweni laseSengekontacket Pard ngaseMartha's Vineyard isebenzisa i-Ellicott® Series 370 Dragon® Dredge. Leli komiti selivumile ukuthi lithengise izinto ezisikiwe edolobheni elingumakhelwane i-Oak Bluffs, elizosebenzisa isihlabathi njengengxenye yephrojekthi yokondla amabhishi emphakathini okule ndawo.
I-Edgartown iyidolobha lesiqhingi kuphela esifundeni esingaba nesakhiwo. Eminyakeni embalwa edlule, ikomidi le-dredge lisebenzise i-Ellicott dredge ukwenza umsebenzi neminye imiphakathi yesiqhingi ukukhipha isihlabathi emizimbeni yendawo ukwenza ngcono ukuzulazula kwesiteshi. Izinto ezisetshenzisiwe zidayiselwa izinhlangano zabaninikhaya, abanikazi bezindlu ezizimele, kanye nomasipala abasebenzisa isihlabathi ukuvikela ugu oluseduze, ingqalasizinda yangasese neyomphakathi futhi babuyisele amabhishi ngezinjongo zokuzijabulisa.
I-370 Dragon® dredge ingesinye sezinto eziphumelela kakhulu zosayizi abancane abaphenya ukusika embonini. Ukuguqulwa kabusha kwe-hull, i-ladder, kanye nezandiso ze-spud zokujula okuhlukahlukene kokumba kunezela emugqeni we-dredges modular design design futhi kufanelekile kubanikazi bokubamba nabokuqala ukusebenza.